Isikhokelo kwiindidi kunye nezixhobo zokuqalisa ukwenza iikhosi zevidiyo ezikwi-Intanethi | Martech Zone
Ukuba ufuna ukwenza isifundo kwi-intanethi okanye ikhosi yevidiyo kwaye ufuna uluhlu olusebenzayo lwazo zonke izixhobo ezingcono kunye nezicwangciso, ke uya kusithanda esi sikhokelo. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndiphande ndaza ndazivavanya izixhobo ezininzi, izixhobo zekhompyutha kunye neengcebiso zokwenza izifundo eziphumelelayo kunye nezifundo zevidiyo oza kuzithengisa kwi-intanethi. Kwaye ngoku unokuluhluza olu luhlu ukufumana ngokukhawuleza eyona nto uyifunayo (kukho into elulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali) kwaye ngokukhawuleza ungxamile ukuvelisa ikhosi yakho elandelayo.
Jonga, qala ngeyona ikhuthaza kakhulu kwaye ufunde kuba ndikulungiselele into ekhethekileyo, kwaye ndifuna ukuqinisekisa ukuba awuyiphosi nangasiphi na isizathu.
Ukurekhodwa kwikhosi yeVidiyo ekwi-Intanethi
Uhlobo lokuqala lwevidiyo oya kufuna ukuyenzela ikhosi okanye isifundo sakho kukubonisa into oyibonayo kwikhompyuter yakho (izilayidi, iinkqubo okanye iwebhusayithi) kwaye ubeke izimvo kuyo ngomsindo. Ngokobuchwephesha yile nto ifuna utyalo-mali oluncinci, kodwa umngcipheko kukuba ukuba uthanda abantu abaninzi endibabona kwiYouTube, uphela usenza iividiyo ezibulalayo ezingathandekiyo ezingasokuze zibukwe mntu.
Kungenxa yoko le nto kubalulekile:
Khathalela ukufezekiswa kwezilayidi
Sebenza kakhulu ekusebenziseni ilizwi lakho
Faka oopopayi kunye neziphumo ezizodwa
Yenza amanxeba angenabundlobongela ngekhefu kunye nezinto ezingafunekiyo
Ingxelo yeRekhodi yeCast
Yeyona software ilula kunye neyona isetyenziswa ngokupheleleyo kwabasaqalayo. Ingxelo yeRekhodi yeCast inomdla, inika ubutyebi, kwaye iipesenti eziyi-100 zisimahla. Nokuba usebenzisa iPC okanye iMac, ungayilawula kwikhompyuter yakho kakuhle kuba isekwe kwiwebhu. Nangona isimahla, ayinamanzi, ngaphandle kwentengiso, kunye nokurekhodwa okuphezulu. Ayinakuba ilahlekile kwibhokisi yakho yezixhobo. Ukongeza, ibonelela ngomhleli wevidiyo eyakhelweyo kunye nelayibrari etyebileyo yezinto, isicatshulwa, oopopayi, ukugquma, utshintsho, kunye nezinto ezininzi zokuhlela eziguquguqukayo njengokuqhekeka, ukusondeza ngaphakathi / ngaphandle, ukusika, njlnjl. abo bafuna ukwenza iikhosi zevidiyo okanye izifundo ezilula.
Ukuqhawula ilungile ukuba ufuna ukwenza iividiyo ezikhawulezayo, ngakumbi ngokubeka izimvo kwiiwebhusayithi okanye kwisoftware. Ikuvumela ukuba urekhode ngokwakho njengoko uthetha, unike umkhombandlela, kwaye ubonise isangqa esihle onokubeka naphi na apho ubona kufanelekile. Iluncedo kakhulu ekwabelaneni ngezimvo zevidiyo ngokukhawuleza noogxa bakho okanye abathengi. Iakhawunti esisiseko isimahla kwaye baneshishini kunye nokunikezela ngamashishini.
Bhalisela i-Loom Simahla
Ukuba usebenzisa isixhobo seApple, Ukuhamba kweSreen Isisombululo osifunayo: urekhoda ii-tutorials ezinkulu kunye nokwenza uhlengahlengiso lwevidiyo. Ngaphandle kwezi mpawu ziphambili, ilula kakhulu kwaye inomdla ukuyisebenzisa, kwaye ineefilitha zomsindo kunye nevidiyo, kwaye iziphumo zesandi zilungile. Iilayisensi zexesha elinye ziqala kwi- $ 129.
Khuphela ukulingwa kokuHamba kweScreen
Iimakrofoni zoMgangatho woMsindo
IBHOYA NGU-M1 Imakrofoni ekwi-omnidirectional clip, efanelekileyo ukusetyenziswa kwevidiyo, eyilelwe ii-smartphones, iikhamera ze-reflex, iikhamera zevidiyo, urekhodo lweaudiyo, ii-PC, njl. Inentambo yeemitha ezi-360 ubude (ene-6 mm jack egolide) ukuze idityaniswe ngokulula kwiikhamera zevidiyo, okanye ii-smartphones ezingafakwanga kufutshane nesithethi. Ixabiso: $ 3.5
I-Sennheiser PC 8 i-USB
The I-Sennheiser PC 8 i-USB kuyacetyiswa ukuba uhamba ujikeleze kakhulu kwaye ufuna ukurekhoda (ngakumbi iscreencast) kwiindawo ezinengxolo yangasemva enesidima. Kukhanya kakhulu kwaye kubonelela ngesandi esifanelekileyo kuzo zombini ezirekhodiweyo kunye nomculo; imakrofoni, ukusondela emlonyeni, inovakalelo kwaye icacile ekuveliseni kwakhona kwelizwi ngokucinezelwa kwengxolo. Ukuxhotyiswa nge-microphone isilumko kunye nokulawulwa kwevolumu kwikhebula, kuyasebenza kakhulu kwiimeko zokusebenza ezifanelekileyo. Ngokucacileyo, inokusetyenziselwa ukunxibelelana nePC / Mac kwaye hayi kwii-smartphones okanye kwiikhamera zangaphandle. Ixabiso: $ 25.02
Rode iVidiyo yeMic Rycote
The Rode iVidiyo yeMic Rycote Umbhobho wombhobho wemipu oyivumela ukuba ifumane iaudiyo ngendlela eya ngaphandle kokuthimba ingxolo esecaleni. Kungoko ke lukhetho olunyanzelekileyo kwi-OUTDOOR shots apho isifundo sihamba kakhulu, sitshintsha rhoqo (umzekelo, xa unezithethi ezi-2/3) okanye ukusetyenziswa kwemakrofoni ye-lavalier ayikhuthazwa ngezizathu zobuhle. Inokufakwa ngokulula kwiikhamera ze-SLR kwaye, kunye neeadaptha ze-smartphone, unokuyiqhagamshela kwiifowuni okanye kwiitafile zokurekhoda kuhlahlo-lwabiwo mali olusezantsi. Ixabiso: $ 149.00
Isoftware yokuHlela ividiyo mahala
OpenShot ngumhleli wevidiyo wasimahla ohambelana neLinux, Mac kunye neWindows. Kuyakhawuleza ukufunda kwaye kunamandla ngokumangalisayo. Ukubonelela ngemisebenzi esisiseko yokwenza ukusika kunye nohlengahlengiso kwividiyo yakho, kunye neendlela ezingasikelwanga mda, iziphumo ezizodwa, utshintsho, ukuhamba kancinci kunye neopopayi ze3D. Kuyacetyiswa ukuba uqala ekuqaleni kwaye ujonge into enexabiso eliphantsi kwaye uyakhawuleza ukuyifunda.
Umhleli weVidiyo yeFlexClip
I-intanethi ngokupheleleyo kwaye isoftware esekwe kwisikhangeli. Umhleli weVidiyo yeFlexClip iza nazo zonke iimpawu ozifunayo ukwenza iividiyo ezintle, ngaphandle kwamava afunekayo. Hlela iziqwengana zabo bonke ubungakanani ngokuthe ngqo kwisikhangeli ngaphandle kobunzima bokulayisha okungathandekiyo. Ukuphelelwa ziimbono? Bhrawuza igalari yeetemplate zevidiyo ezinokuzenzekelayo ezenziwe ziingcali ezilungiselelwe ishishini lakho. Bacinge wonke umntu: ukusuka kwiividiyo zesitishi sakho seYouTube ukuya kwimfundo okanye iividiyo zoqeqesho. Kuhle ukuba ufuna ukwenza iimvavanyo ezikhawulezayo.
Iindleko: i-freemium (ukuthunyelwa simahla simahla kwi-480p, emva koko ukusuka kwi-8.99 $ / ngenyanga) Ungaya kwi I-AppSumo ukufumana ingxelo yayo yobomi ngeli xesha.
Shotcut Isoftware yasimahla, enokuphunyezwa kwiLinux, kwiMacOS, nakwiWindows, evulelekileyo nevulekileyo, ekuvumela ukuba wenze iividiyo, uzilawule kwaye uzithumele ngaphandle ngeendlela ezininzi. Ujongano lubhetyebhetye kwaye linomdla. Imiyalelo icwangciswe kakuhle, ineefilitha ezininzi kunye notshintsho olusebenzayo. Ixhaphakileyo, inendawo elungileyo yokufunda kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ukuhlaziywa rhoqo, ukwazisa amanqaku amatsha kunye nokusebenza, ngokuqhubekayo kuphucula ukusebenza kwayo.
Inika into ebekiweyo njengesoftware yorhwebo. Ixhasa iifomathi ezininzi ngezigqibo ukuya kuthi ga kwi-4K. Inika ulawulo oluphambili lwevidiyo kunye nomsindo, iziphumo, ixesha elifanelekileyo kunye nokuhlelwa kwezinto ezininzi, kunye nokuthumela ngaphandle ngokwesiko ngeeprofayili ezichazwe kwangaphambili.
Apho unokuPapasha iVidiyo yakho yeKhosi ekwi-Intanethi
Xa sele udale iividiyo zakho, lixesha lokuba uzenze zifumaneke kubaphulaphuli bakho kwaye "uzilungiselele" kwii-portals (esiza kuthetha ngazo kwicandelo elilandelayo) apho uhambisa khona ikhosi yakho yevidiyo. Emva koko masibone ukuba singazipapasha phi iikhosi zethu ezikwi-Intanethi.
YouTube -Ayifuni kwaziso kuba liqonga eliphambili kwihlabathi levidiyo. Ine-interface elula, ikunika izibalo ezilungileyo zeemovie, kwaye okona kungcono, yi-100% yasimahla. Yiyo ke, isisombululo esifanelekileyo kuphela ukuba awunalo uhlahlo-lwabiwo mali okanye ufuna ukupapasha ividiyo ngokukhawuleza. Icala elibi kukuba iYouTube izakubeka iintengiso kwiividiyo zakho, kwaye oko akuncedi ekwenzeni umfanekiso wobungcali (kwaye unokuqhuba ukugcwala kwabo ukhuphisana nabo). Ngamafutshane: yisebenzise kuphela ukuba awunazo ezinye iindlela okanye ukuba ufuna ukukrala ijelo le-YouTube oza kulisebenzisa ukukhulisa abaphulaphuli bakho ngokwasemzimbeni. Iindleko zisimahla.
bedlala - Yeyona # 1 enye indlela eya kuYouTube njengoko, kutyalo mali oluncinci, inika ithuba lokwenza ngokwezifiso iisetingi ezininzi (ngakumbi imfihlo), utshintshe useto lweevidiyo ezithile kwiqela, kwaye ngaphezulu kwako konke, ayibonisi ntengiso. Kulula kakhulu ukumisela nokulawula. Isisombululo esifanelekileyo ukuba iqonga lakho lokuhambisa ikhosi aliboneleli ngokusingathwa simahla okungenamkhawulo, nangenxa yokuba (njengeYouTube) iphakamisa umgangatho ngokobubanzi bebhendi kunye nesixhobo osisebenzisayo. Iindleko: zasimahla (izicwangciso-qhinga eziqala kwi- $ 7 / ngenyanga kucetyiswa)
Qalisa ukwenza ikhosi yakho ngoku!
Ukuba usonwabele esi sikhokelo sinzulu kuzo zonke izixhobo eziphambili zokwenza ikhosi ephumeleleyo kwi-Intanethi (kwaye eneneni iyanceda abaphulaphuli bakho), isasaze. Sukulinda ngokude. Zama ukudala iikhosi zakho zevidiyo kwi-intanethi namhlanje.
Ukwazisa: Martech Zone isebenzisa amakhonkco obulungu kulo lonke eli nqaku.
tags: nditshoImakrofoni yentlokoImakrofoni yelavalierUkuqhawulaekhompyutheniqeqesho lwe intanethiikhosi yevidiyo ekwi-intanethiizixhobo zoqeqesho kwi-intanethiukuvulwaushicilelorekhodaUkuhamba kwescreenSennheiserumpuImakrofoni yeslrukuhlela ividiyoisoftware yokuhlela ividiyoumhleli wevidiyoumbhobho wevidiyoisishicileli sevidiyouqeqesho lwevidiyobedlalayoutube